रसियामा कतिवटा नागरिकता अनुमति छ त्यो रूसी संघको संविधानको nd२ औं अनुच्छेद द्वारा नियमित छ। आधारभूत कानूनले बहु नागरिकता निषेध गर्दैन। न्यायशास्त्रमा कुनै संगत शब्द छैन।
धेरै नागरिक कसरी एक व्यक्ति गर्न सक्छन्?
रूसी संघको विधानले यसका नागरिकहरूलाई अधिग्रहण गरिएको नागरिकताको संख्यामा सीमित गर्दैन। युक्रेनमा, दोस्रो पासपोर्टमा प्रतिबन्धहरू अवस्थित छन्, तर त्यहाँ यताउता जान सक्ने तरिकाहरू छन्। काजाकिस्तानमा यो क्षेत्र धेरै कडाईका साथ नियन्त्रण गरिएको छ।
कसरी धेरै नागरिक रूसीमा अनुमति छ?
रसियामा कतिवटा नागरिकता लिन अनुमति छ त्यो रूसी संघको संविधानको nd२ औं अनुच्छेद द्वारा नियन्त्रित छ। आधारभूत कानूनले बहु नागरिकता निषेध गर्दैन। न्यायशास्त्रमा कुनै संगत शब्द छैन। रसियनहरूसँग छनौटको पूर्ण स्वतन्त्रता छ। एक व्यक्ति कत्तिको नागरिकता लिन सक्दछ, सबैले व्यक्तिगत निर्णय गर्दछन्, तिनीहरूको आफ्नै इच्छा र आवश्यकताहरूमा निर्भर गर्दछ। राज्यको एक मात्र आवश्यकता भनेको status० दिन पछि प्रवासको सेवामा नयाँ स्थिति रिपोर्ट गर्नु हो।
यूकेरेनमा तपाईं कसरी गर्न सक्नुहुन्छ धेरै नागरिकहरू?
युक्रेनमा कति जना नागरिक हुन सक्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर स्पष्ट र स्पष्ट छ - एक, यूक्रेनी। राज्यको संविधानले बहु नागरिकता निषेध गरेको छ।
तर यो देश मा तपाईसंग कति नागरिकता हुन सक्छ सबैले स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्छन्। प्रक्रियाको अभावका कारण उल्लंघनकर्ताहरूलाई दण्ड दिन लगभग असम्भव छ।
के यो सम्भव छ २ राहदानी वा तीनवटा नागरिकता - यो सबै व्यक्तिको क्षमतामा निर्भर गर्दछ। जे भए पनि, सबै देशहरूले युक्रेनलाई सूचित गर्न बाध्य छैनन् कि यसका नागरिकले अर्को राहदानी पाए।
यो कस्तो प्रकारको नागरिकता हो भनेर विस्तारपूर्वक अध्ययन गर्न बाँकी छ, र नयाँ अवसरहरू खोलियो जुन प्रयोग गर्दछ।
के यो कजाखस्तानमा दुई नागरिक बन्न सम्भव छ?
कजाकिस्तानमा तपाईसँग कतिवटा नागरिकता हुन सक्छ भन्ने कुरा संविधानले आधारभूत कानूनको १० औं अनुच्छेदबाट स्थापित गरेको छ। उल्लंघनकर्तालाई जरिवाना र निर्वासित गर्ने अधिकार छ। यदि तपाईंसँग काजाकिस्तानको नागरिकता छ भने, तपाईंको नागरिकता प्राप्त गर्ने निर्णयलाई विचार र तौल गर्नुपर्छ।
↑ तपाईसँग कति नागरिकता हुन सक्छ ↑ कति नागरिकता अनुमति छ ↑ रूसमा कति नागरिकता अनुमति छ ↑ युक्रेनमा कति नागरिकता अनुमति छ ↑ कजाकिस्तानमा कति नागरिकता अनुमति छ ↑ रूस दोहोरो नागरिकता ↑ युक्रेन दोहोरो नागरिकता ↑ काजाकिस्तान दोहोरो नागरिकता ↑ रसिया दोस्रो नागरिकता ↑ युक्रेन दोस्रो नागरिकता ↑ काजाकिस्तान दोस्रो नागरिकता ↑ दोहोरो नागरिकता अनुमति ↑ दोस्रो नागरिकता अनुमति ↑ दोहोरो नागरिकता ठीक छ ↑ दोस्रो नागरिकता ठीक छ ↑